Izy mantsy no filohan’ny GPS na Groupe parlementaire spécial. Mbola anisan’ireo mafana fon’ny PMP izy na plate-forme majoritaire présidentielle », hoy ny depiote teo aloha Henri Charles Randriamahefa voafidy tany Moramanga teo aloha. Olon’ny fampihavanana sy ny firaisankina izy, tsy nahazaka mahita olona sahirana, hoy hatrany io solombavambahoaka namany io. Nanamafy izany ireo mponina maro be an’Atsimondrano teny amin’ny Lapan’i Tsimbazaza ka hatreny Ankatso fandevenana omaly. « Niantoka ny fandevenana ireo lavitra tanindrazana izy, ireo vehivavy rehetra didina am-piterahana ihany koa, izy no nisahana izany. Nanome zezika ny tantsaha, fitaovam-pianaran’ny mpianatra, rano fisotro madio, nanampy tamin’ny fotodrafitrasa tahaka ny tohadrano sy ny lalana izy », hoy ireo antenne, solontenany any amin’ny fokontany.
Efa nolovainy teo amin’ny fianakaviana izany asa soa izany raha ny filazan’ny reniny. « Nanana orinasa izahay ary efa nanao asa soa tamin’ny sekoly sy ny fiangonana ka io no nanabeazana azy. Safidy ny politika fa tsy nanomana azy tamin’izany izahay, nefa tsy nanary azy kosa. Tsy sasatry ny maka torohevitra aty aminay ray aman-dreniny izy, indrindra izaho reniny », hoy i Bakoly Francine Ranoromalala, izay nilaza fa mafy ny mandevin-janaka amin’ny maha fon-dreny azy. Nomen’ny fanjakana mariboninahitra izy ka ny “Ordre de merite sportif avy amin’ny minisitera mpiahy, “Commandeur de l’ordre national” kosa izay notoloran’ny filohan’ny Antenimieram-pirenena teo aloha, Jean Max Rakotomamonjy.